10 Fikradaha Hadiyadaha ah ee loogu talagalay dadka jecel dabeecadda | Ragga Stylish
10 Fikradaha Hadiyadaha ee Loogu talagalay Dadka Jecel Dabeecadda
Alicia tomero | | fashion, Waqtiyada firaaqada
Raggaas iyo kuwa dabeecadda jecel waxaan u haynaa 10 fikradood oo hadiyad ah oo lagaa yaabin karo maalmahaas xiisaha leh sida… Kirismaska, sannad-guurada ama munaasabadaha muhiimka ah sida dhalashada. Hadiyadaha marwalba waa la caabudaa oo waxaan jecel nahay in haddii ay suurta gal tahay ay kulmaan oo ay ku habboon yihiin shakhsiyaddaada.
Ninkee uma baahna hadiyad safarkiisa bannaanka si uu u sahamiyo arrimaha cusub? Halkan waxaad ku yeelan doontaa ikhtiyaarrada loo yaqaan 'hikers', xerooyinka iyo fuulitaanka buuraha iyo fikradaha aad kula qaadan karto dhammaan sahamintaada. Haddii aad sidoo kale rabto inaad ka sahamiso noocyada kale ee xulashooyinka halkan, waad arki kartaa maqaalkeena ku saabsan hadiyadaha, oo aan ku qornay Ragga leh qaab.
1 Hadiyado loogu talagalay dabeecadaha jecel
1.1 Ka xoqo boodhka khariidada adduunka
1.2 Xidhmada xiisaha safarka
1.3 Muraayadaha ragga ee Photochromic
1.4 Qalabyo badan
1.5 Xeedho Qoraxda la qaadan karo
1.6 Hadal haye dibadeed oo la qaadan karo
1.7 Gacanta kululeyn karta
1.8 Dhalooyinka safarka
1.9 Shaandhada biyaha LifeStraw
1.10 Kiiska biyuhu mobile
1.11 Faynuus la quusin karo oo biyaha ku jira
Hadiyado loogu talagalay dabeecadaha jecel
Xulashadayada soo jeedinta waxaad kala dooran kartaa hadiyadan wax ku oolka ah ee wax ku oolka ah ee aan lagu waayi karin waxyaabo badan oo mustaqbalka ah, dhammaantood kuma qaadan doonaan waqti dheer inaad ku hesho khadka tooska ah iyo miisaaniyad la awoodi karo:
Ka xoqo boodhka khariidada adduunka
Hadiyadani waxay iila muuqataa mid asal ah. Waxaa loogu talagalay dhammaan dadkaas jecel inay u safraan adduunka oo dareemaan inay ku qanacsan yihiin meelaha ay booqdeen. Khariidadan aduunka waxaa sameeyay koox khabiiro sawir qaadayaal khibrad u leh oo hindisay sidii gasho khariidad leh rinji dahab ah oo aad xoqin karto oo markaa ku muujiya midabada waddanka booqday asalka.
Xidhmada xiisaha safarka
Xirmooyinka fannaaniinta waxaa loogu talagalay dalxiisayaasha iyo kuwa safarka jecel. Waxay ku qalabeysan tahay dhar iyo siibado la jeexjeexay oo aad ugu adkaysanaya jiidista iyo qoyaanka Runtii waanu ka helaynaa baakadan xiisaha badan maxaa yeelay Waxaa loo qaabeeyey si ay lacagtu si fiican u qarsoon tahay oo wax kasta oo aad isticmaasho aad gacanta ugu heli karto marka hore. Qaabkeeda waxaa loo abuuray in loo jeclaado sida caadiga ah, oo leh dhar jilicsan, oo aan biyuhu xireyn iyo awood weyn si aad u qaadan karto nooc kasta oo casriga ah.
Muraayadaha ragga ee Photochromic
Muraayadaha ayaa ah sheyga muhiimka ah ee muhiimka ah inaad safar gasho oo aad saacado badan ku qaadato dibadda. Sababta sawir qaade Waa cunsur aad muhiim ugu ah astaamaha muraayadaha indhaha. Hantidan, iftiinka ayaa la qabsan doona indhaheena iyo aan iska ilaalino isbedelada ba'an ee dhalaalka min aag ilaa deegaan.
Dhammaan tacabiirayaashu waxay jecel yihiin inay ku qaataan noocyadan qalabka waxqabadka badan ee boorsooyinkooda, waana wax lala yaabo. Waxaa loogu talagalay inay siiyaan ku dhowaad fursad kasta oo shaqeyneysa oo dhici karta.
Maqaarka Leatherman Wingman yimaado qalabaysan 14 qalab sida kiishashka, mindi, qalabka wax lagu rido, feylka, furitaanka, maqasyada, silsiladaha siligga ... dhammaantood waxtar badan baahiyahaas yar dhaqamada soo bixi kara.
Qalabka SANON waa mid wax ku ool ah kuwa ciyaaraha jecel baaskiil. Waxay ku habboon tahay dayactirka baaskiiladaha waxayna bixisaa 11-in-1 isku dheelitirnaan badan.Waxaa iyaga ka mid ah waxaan ka heli karnaa darawaallo aad u adkeysi badan oo leh saldhigyo kala duwan naqshaddiisa weynna waa wax lala yaabo maxaa yeelay way fududahay in la qaado oo la keydiyo.
Xeedho Qoraxda la qaadan karo
Waxaan ku sii dhowaaneynaa helitaanka tikniyoolajiyad nolosheena aad u fudud. Qalabkani wuxuu tamarta qoraxda u beddelaa tamarta korantada waana fududahay in la qaado, waxay ku timaadaa jillaab si aad uga soo qaadato boorsadaada iyo wixii la mid ah nuugo tamarta qorraxda adoo socda.
Qalabkan waxaad ka qaadi kartaa moobilkaaga mahadnaqa soosaarka USB-ga. Waxay leedahay marawaxad yar si ay u qaboojiso cimilada kulul oo nashqadeheeda lagu qalabeeyo shoogga iyo biyaha caabbinta.
Hadal haye dibadeed oo la qaadan karo
Hadalkani waa mid wax ku ool ah oo horeyba u jiray wuxuu ku yimid qaab loogu talagalay cod wax ku ool ah oo aad u fiican si aad ugu raaxeysan karto muusikada ku xeeran adigoo ku xiraya Bluetooth. Waad ku raaxeysan kartaa ilaa 24 saacadood gudahood waxayna awood u leedahay inay adkaysi u yeelato bannaanka, gaar ahaan biyaha.
Gacanta kululeyn karta
Kuleyliyahaani wuxuu u noqon karaa mid wax ku ool u ah dadka tamashleynaya ee u gelaya cimilada qabow daran Way fududahay in la qaado, miisaan fudud oo leh badbaado wanaagsan si looga fogaado culeyska iyo kuleylka badan.
Dhalooyinka biyaha dumi kara waxaa loogu talagalay si loogu qaado si badbaado leh oo fudud safaradaada duurka. Way isku laabmayaan oo meelna kama qabsanayaan markay madhan yihiin oo si nabadgelyo leh ugu adkeysan kara heerkulka daran ee dareerahooda.
Shaandhada biyaha LifeStraw
Miirayaasha biyaha sidoo kale waa inay lahaadaan qalab inaad ka cabi karto biyo meel kasta ha noqotee adigoon wax dhibaato ah ka qabin bakteeriyada iyo dulin-ku-nooleyaasha. Waad la yaabi doontaa inaad ogaato inay leedahay awood sifeyn ah oo gaareysa 1000 litir waxayna ku siinaysaa dammaanad qaad buuxda oo la isku halleyn karo.
Kiiska biyuhu mobile
Gabi ahaanba waa la quusin karaa biyaha iyo adkaysi u leh xaalad kasta oo banaanka ka baxsan. Kaliya maahan wax u qalma in aan biyuhu ka dhaqaajin mobilada, laakiin waxaad qaadan kartaa dukumiinti, waraaqo qaar ama lacag adiga oo aan xanaaqin ama qoyan.
Faynuus la quusin karo oo biyaha ku jira
Qalabkani had iyo jeer waa mid waxtar u leh xiisaha waxaana jira qaar ku siiya faa iidooyin aan caadi ahayn sida midka aan dib u eegnay. Waxaad had iyo jeer sharad karaa on toosh-si-qaado-toosh iyo Ku quusin karo biyaha, xoogan, adkaysi badan lehna iftiin kala duwan. Waxay u qalabaysan yihiin inay ka dhigaan hal-abuurnimo mid aad u fudud.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » 10 Fikradaha Hadiyadaha ee Loogu talagalay Dadka Jecel Dabeecadda
Boorsooyinka indhaha ragga ku hoos jira
Ku habboon jaakad